आज जुसले काम चलाउनुस्, भोलिदेखि पानी व्यवस्था गरौंला « Tuwachung.com
अनिल शर्मा विरही	२०७७ आश्विन १०, १९:५४
बेइजिङमा जस्तै सुचाउमा पनि चिनियाँहरू पानीभन्दा सुप, जुस र बियर धेरै खाएको देखिन्थ्यो । हाम्रो कोठामा एक लिटरभन्दा कम पानी राखिदिएका छन् । हिजो साँझ खाना खाँदा होटलमा पानी नभएपछि होटेलका कर्मचारीले ‘आज जुसले काम चलाउनुस् भोलिदेखि पानी व्यवस्था गरौंला’ भनेका थिए । पानी र साधारण जुसको मूल्य बराबर छ । कोठाको पानी बेलुकै सकिएको थियो । बिहान औषधि खाने पानी भएन । मेरो सामुन्नेमा चन्द्रकिशोर झाको कोठा थियो । पानी छ कि भनेर बाहिर निस्केको त म्याग्नेटिक कार्ड लैजान बिर्सेछु । ढोका बन्द भयो । अब परेन फसाद ! लबीमा गएँ । बेइजिङको होटलमा जस्तो स्वचालित भ¥याङका लागि भने चिर्कटो चाहिन्नथ्यो ।
लबीमा गएर समस्या राखें । उसले अंग्रेजी बुझ्दी रहेनछ । हाँस्दै सिसाकलम र कागज हातमा थमाई । उसले त्यो कागज लिएर कतै गई । त्यसपछि अर्की साथी ऊ सँगै लबीमा आइपुगी । मैले आफ्नो परिचय लेखेर दिएको कागज हेर्दै टुटेफुटेको अंग्रेजीमा ‘ए, मैले तपाईंलाई चिनें के समस्या भयो त ?’ भनी । मैले आफू बाहिर निस्कँदा ‘म्याग्नेटिक कार्ड’ लिएर निस्कन बिर्सेको हुनाले कोठा बन्द भएको छ भनेपछि ‘हुन्छ म खोल्न लगाउँछु, तपाईं जानुस्’ विनम्रतापूर्वक भनी । भोटिनीले अब त कुरो बुझी होली भनेर कोठातिर लागें । म पुग्दा नपुग्दै एकजना लाठे कोठाअगाडि उभिरहेको रहेछ । उसले केही नभनी एउटा चिर्कटो दियो । त्यो चिर्कटो ढोकाको नाकमा सुँगाएपछि टुइँक्क गर्दै हरियो बत्ती बल्यो । ढोका खोलेर औषधि खाएपछि बिहानको खाजा खान रेष्टुरेन्टतिर लागें । हामी ८ः५० मा लबीमा जम्मा भइसकेका थियौं ।
पानी हिजोदेखि नै दर्किरहेको थियो । क. वाङ, क. छिङ र फिनिक्सले हाम्रा लागि छाता व्यवस्था गरेका रहेछन् । हामी पोर्टल्यान्ड सडक हुँदै सुचाउ सांस्कृतिक केन्द्रतिर लाग्यौं । संस्थाका पार्टी सचिव र अरू कर्मचारी स्वागतार्थ उभिएका थिए । बसको ढोकादेखि भवनसम्म छाता लिएर एउटा पंक्ति उभिएको थियो । हाम्रो शरीरमा पानी नपरोस् भनेर उनीहरू सतर्क देखिन्थे । अतिथि सत्कारप्रतिको गम्भीरताबोध प्रकट गरिएको होला । चिनियाँको आफ्नै शिष्टाचार शैली छ । केन्द्रकी सदस्य एकजना भद्र महिलाले बेलिविस्तार लगाउँदै हामीलाई घुमाइरहेकी थिइन् ।
अठारौं शताब्दीकै सांस्कृतिक वैभवको धनी सुचाउलाई आजको सांस्कृतिक आर्थिक केन्द्र बनाउन १४५ भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्र्याइएको रहेछ । जसमध्ये मुख्य लगानीकर्ता एसियाको नयाँ बाघ भनेर चिनिने सिंगापुर रहेछ । कुनै बेला चीनको सुचाउबाट बसाइँ सरेर गएका चिनियाँमूलका सिंगाली नै मुख्य लगानीकर्ता रहेछन् । यहुदीले इजरायल–अमेरिका सम्बन्ध निर्धारण गरेझैं सुचाउमूलका सिंहालीले सिंगापुर–चीन सम्बन्ध निर्धारण गर्ने गर्छन् ।
चिनियाँले लोभलाग्दो सुविधा दिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउँछन् । माछा बल्छीमा अड्केपछि घिसार्न थाल्छन् भनिन्छ । भनिन्छ– चीनसँग लड्ने क्षमता अमेरिकाले पनि गुमाउँदै गएको छ । चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइयो भने अमेरिकाभित्रै प्रतिवाद हुने स्थिति बन्दै गएको ठानिन्छ । चीन–अमेरिकाको ठूलो आपूर्तिकर्ता र ऋृणदाता मुलुक भइसकेको छ । चीनले बिस्तारै संसार निल्दै गएको ठान्नेको कमी छैन । त्यसैले त विश्वविजेता नेपोलियन बोनापार्टले चीनप्रति संकेत गर्दै ‘त्यहाँ एउटा सिंह निदाइरहेको छ, त्यसलाई निदाइरहन देऊ,’ भनेका थिए । सन् १९४९ पछि चीनमा निदाइरहेको सिंह व्युँझिसकेको छ । त्यो सिंह रोगी या बूढो भएर मानव बस्तीतिर नजाओस् भन्ने तेस्रो विश्वको अपेक्षा छ ।
चीनमा निजी र सामूहिक दुवैको समायोजन भएको प्रयोग ‘सहकारी’लाई कृषि र व्यापारमा निकै प्रयोग गरिएको मानिन्छ । सोभियत संघले विकास गरेको यो प्रयोग विश्वभरि प्रचलनमा रहेको छ । नेपालमा भने असफल देखिन्छ । स–साना छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नलायक, वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान् बनाउनु र उत्पादक र ग्राहकबीचमा सिधै सम्पर्क कायम गरेर बिचौलियाको अन्त्य गर्नु सहकारीको मूल उद्देश्य हुन् । नेपालमा सहकारी व्यवस्था र बिचौलियाका कारण सहकारी व्यवसाय असफल भएको छ । सांस्कृतिक केन्द्रको अध्ययनपछि हामी त्यसको छेउमै रहेको सामुदायिक बजारमा पुग्यौं । सरकारी विकास आयोजना गर्दा विस्थापित परिवारलाई पनि त्यसप्रकारका सामुदायिक व्यवसायमा संलग्न गराउने गरिएको रहेछ । दर्जनौं साना नानी खेलिरहेका, तिनका आमाले खेलाइरहेका, कतै बूढी आमा नाचिरहेका, कतै बूढा काकाहरू बाघचाल खेलिरहेका देखिन्थे ।
चीनलाई पश्चिमी देशले अझै पनि बन्द समाज भन्ने गरेका छन् । तर, हामीमा त्यसप्रति कुनै भ्रम थिएन । आतंकवादी खतराका कारण चीनले अन्तर्राष्ट्रिय फोनमा कडाइ गर्ने गर्छ । स्थानीय सेवा भने सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा निगरानी, गोपनीयता र आर्थिक फाइदा युरोप, अमेरिकासँग निहित छन् । एक चिनियाँ अधिकारी भन्छन्, ‘चीनमा मोबाइल फोन गर्ने ८० प्रतिशत ग्राहक ‘वी च्याट’ प्रयोग गर्छन् । अरू सामाजिक सञ्जालको चिनियाँ विकल्प छिट्टै प्रयोगमा आउनेछ ।’ पश्चिमाले आफ्नो उत्पादन प्रयोग नगर्नुलाई नै बन्द समाज भनेर प्रचार गर्छन् । जनमत त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । पश्चिमाले उनीहरूको संस्कृति र सभ्यतालाई मानक बनाउँछन् । त्यसबाट बाहिर परेका सबै सभ्यता र संस्कृतिलाई असभ्य भनिदिन्छन् । त्यो आफैंमा असभ्य र हिंसात्मक चिन्तन हो । आत्मनिर्भर आर्थिक, सांस्कृतिक विकल्प र पूर्वीय दर्शन तथा परम्पराको निरन्तरता चीनका महान् उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यसलाई असभ्यता होइन, सभ्यताको संघर्ष भन्न सकिन्छ ।
मध्याह्न १२ बजे खाना खान IING ZHAI HOTEL गयौं । त्यो होटलमा एउटी सोझी, सुधी बालिका ‘वेट्रेस’ थिई । त्यसलाई मैले बालश्रम ठानेको थिएँ । गोरुझैं जोतिइरहेकी त्यो बालिकाले स्वेच्छाको ध्यान पनि आकर्षित गरेको रहेछ । ‘मलाई त मित लगाउन मन लाग्यो यो केटीसँग’ स्वेच्छा भन्दै थिइन् । हामीले १३ वर्ष अनुमान गरेकी ज्याओ १९ वर्षकी रहिछन् । हुवेई प्रान्तबाट रोजगारीका लागि सुचाउ आएकी ऊ स्वेच्छाले मितिनी लगाउन चाहेको कुरा फिनिक्सले चिनियाँ भाषामा बेलिविस्तार लगाएपछि असाध्यै खुसी भई । स्वेच्छा र ज्याओ ज्याओले टाउको ठोकेर मित लगाए ।
हामीले उठेर ताली बजायौं र त्यो खुसीमा सहभागी भयौं । ‘हामी च्याटमा भेट्ने है,’ बालसुलभ मुस्कानमा ज्याओज्याओ भन्दै थिई । यात्रामा त्यस्ता मानिससँग भेट हुन्छ, जसले क्षणभरमा गहिराइसम्म पसेर प्रभाव पार्छन् । बिजुली चम्केझैं क्षणभरमा अलप हुन्छन् । तर, तिनको स्मृतिविम्ब लामो समयसम्म रहिरहन्छ । जीवन भनेको स–साना घटना, परिवेश र संयोगको पुञ्ज रहेछ । “बेइजिङमा निर्मला रुनु भएझैं सुचाउमा भोलि रुने पाले स्वेच्छाको होलाजस्तो छ” मैले भनें । खाना खाएपछि हामी होटलतिर लाग्यौं । मुसलधारे वर्षा भइरहेको थियो ।
सुचाउ इपू ५१४ मा निर्माण भएको प्राचीन सहर हो । चीनमा कुन्मिङ, गोन्झाउजस्ता तीव्र गतिमा विकास भएका अरू सहर पनि छन् । तर, सुचाउले आफ्नो प्राचीन वैभव र गौरव कायम गरेर तीव्र गतिमा विकास गरेको मानिन्छ । अठारौं शताब्दीको बगैंचावाला निकुञ्ज, पुरानो सहर, नदी, तलाउ यहाँका मुख्य आकर्षक हुन् । १४औं शताब्दीमा सुचाउ सहर चर्चित रेशम व्यापारको प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पनि थियो । सांघाईको कोखमा जन्मनु आर्थिक दृष्टिले सुचाउको अनुकूलता मानिन्छ । यसलाई बगैंचा नै बँगैंचाको सहर, पूर्वको भेनिस, शास्त्रीय ज्योति आदि उपमा दिइने गरिन्छ । यो Yangzi River किनारको २,५०० वर्ष पुरानो सहर हो । बेइजिङ–सुचाउ तीव्र गतिको रेल सुरुमा ४५० किमि प्रतिघन्टा दौडन्थ्यो र नियन्त्रण गर्न कठिन भएपछि ३०० किमि औसतमा झारिएको रहेछ । बेइजिङ सुचाउ १,५०० किमि दूरीको भाडा नेपाली मुद्रामा ३,१४१ रुपयाँ रहेछ ।
अपराह्न २ देखि ५ बजेसम्म गोष्ठी थियो । रेनमिन विश्वविद्यालयको सुचाउ क्याम्पसको गोष्ठीमा चिनियाँ पक्षबाट नेतृत्व गरेकी महिलाले झर्को लाग्नेगरी लामो बोलिन् । हाम्रा टोलीनेता माधवप्रसाद पौडेलले सुचाउ र काठमाडौंबीचमा भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने विषयमा जोड गरे । युरोप, अमेरिकालाई राम्ररी बुझेका साथीभाइ भन्दै थिए, ‘युरोपले प्राचीनतामा टेकेर, त्यसलाई नष्ट गरेर अगाडि बढेको छ । तर, चीनले प्राचीनता र आधुनिकतालाई समायोजन गरेको छ । त्यसैले त चिनियाँहरू गर्वसाथ भन्छन्– पश्चिमको चश्माले चीनलाई नहेर !’
गोष्ठी सकिएपछि खाना खाने होटलसम्म विश्वविद्यालयको भित्री गोरेटो हुँदै पैदलै आयौं । अहिले पनि धेरै मानिसलाई आधुनिक सभ्यताको उत्कर्ष पश्चिमी संसारमात्रै भन्ने लाग्दो हो । तर, हिमालयको करेसानेरको भू–स्वर्गमा हामी विचरण गरिरहेका थियौं । यता आएपछि स्याल कराएको नसुनिएको भए पनि आकाशमा भने ‘घामपानी, घामपानी स्यालको बिहे’ भनेझैं भइरहेको थियो । झरीपछिको घमाइलो साँझ ढल्किँदै थियो । एक ठाउँमा ढकमक्क इन्द्रकमल फुलेको । त्यसको सुगन्ध चारैतिर नाच्दै थियो । इन्द्रकमलको नृत्यमा साथीहरूले गीतले साथ दिए–
“यो नानीको शिरैमा इन्द्रकमल फूल फुल्यो
चोली दिउँला मखमली सारी दिउँला फाइबर
मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर”
हामी बिस्तारै सुचाउको सुन्दरतामा रमाउँदै हिँडिरहेका थियौं । विद्यार्थी बास्केटबल खेलिरहेका थिए । त्यसको नजिकै सिमसारमा सेतो, रातो रङका कमल हाँसिरहेका थिए । ‘कस्तो लाग्दै छ त सर ?’ मैले तीर्थ कोइरालालाई भनें । ‘म त ईष्र्याले जलिरहेको छु यार,’ कोइरालाले सधैंझैं हँस्यौलोपारामा भने । साँझ ६ः३० मा खाना खायौं । ज्याओ ज्याओले भाइटीकाका दाजुभाइलाई जस्तै हार्दिकतापूर्वक खाना खुवाई । स्वेच्छालाई त बच्चालाई झैं खुवाईदेलीजस्तो गर्थी । हाम्रो वरिपरि मात्र उसका आँखा हुन्थे । ऊ होटलकी कामदार हो । उसलाई सबैतिर भौंतारिनुपर्छ । आज उसलाई काममा पनि केही छुट भएझैं लाग्थ्यो । उसका साथीलाई पनि स्वेच्छासँग उसको निकटताको प्रसंग थाहा थियो । भाषाको पर्खाल नभएको भए ऊ कति चिरबिर गर्थी होला । त्यो सुधी श्रमिकले हामीलाई आँखाले देखुन्जेल हात हल्लाउँदै बिदा गरी ।
हामी खाना खाएर वाहनमा चढिसकेका थियौं । फिनिक्सले ‘अब हामी सुचाउको रात्रिजीवन हेर्न जाँदैछौं,’’ भनी हामी सहरका विभिन्न स्थानमा गयौं । झरना घरको छतबाट बरन्डा हुँदै पिँढीमा खसेको दृश्य कृत्रिमजस्तो लाग्दैनथ्यो । भीमकाय भवन थिए । ठाउँअनुसार फरक–फरक बान्कीका भवन थिए । विद्युत्को प्रकाशलाई बगैंचा र बाटोका दायाँ–बायाँ सजाएको दृश्य अर्को सुन्दर पक्ष थियो । दिउँसो हिँडेको स्थानमा राति पुग्दा अर्कै सहरजस्तो लाग्थ्यो । रात छिप्पिँदै जाँदा सुचाउ व्युझिँदै गरेझैं लाग्थ्यो ।
सुचाउको रात्रिजीवनको एक झलक हेर्दा रातको १२ बजिसकेको थियो । भोलि हामी सुचाउ छोडेर सांघाइतिर जाँदै थियौं । होटलमा पुग्दा १२ः१५ भइसकेको थियो । फिनिक्सले भोलि बिहान ८ः४५ मा लबीमा जम्मा भइसक्ने सूचना दिएर गैसकेकी थिइन् । आज दिनभरिको व्यवस्तताले अलि बढी थाकेको महसुस भएको छ । राति १२ः३० मा हामी आ–आफ्नो कोठामा पुग्यौं । झ्यालबाट बाहिर सडकमा हेर्दा सुचाउ निदाएझैं लाग्थ्यो ।
रेनमिन विश्वविद्यालय, उत्तर सुचाउ
२०७१ असार ४/२०१४ जुन १७